FBC - Haati warraa preezdaant Mulaatuu fi maatiin isaanii maatii lammiilee Qosheetti balaan irra ga’e deeggaran
Haati warraa preezdaant Mulaatuu fi maatiin isaanii maatii lammiilee Qosheetti balaan irra ga’e deeggaran
Finfinnee, Bitootessa 9,2009(FBC) –Haati warraa preezdaant Dooktar Mulaatuu Tashoomaa fi maatiin isaanii, naannoleenii fi dhaabbileen addaddaa maatii lammiilee Qosheetti miidhaan deeggaruuf har’a Birrii miiliyoona 9 ol laatan.
Haati warraa fi maatiin preezdaant Mulaatuu Birrii kuma 50, naannoon Kibbaa Birrii miiliyoona 5, bulchiinsi magaalaa Adaamaa Birrii miiliyoona 1 fi meeshaalee Birrii miiliyoona 1.5 baasu waliigalaan Birrii miiliyoona 2.5 deeggareera.
Baankiin Intarnaashinaalaa Birhaan Birrii miiliyoona 1, naannoon Hararii ergaa gabaabaa 8989n guyyaa lama keessatti Birrii kuma dhibba 5 fi kuma 4, leenjitoonni hoggansa Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa gama isaanitiin kuma 40 fi 381 deeggaraniiru.
Har’a waliigalaan Birriin miiliyoona 9 fi kuma 94 fi 381 deeggarsaan argameera.
Oduuwwan Biroo « Iityoo Teelekoom tajaajilli intarneetii bilbila sochootuu yammuu adda citu hojimaata herreega itti hin fayyadamnetti fayyadamuu dandeessisu hojiirra oolche	Waggaa 3tti saawwanii fi bushaayeen miiliyoona 1 ni diqaalomu »